हेटौंडा र चितवनमा अदालत अब चौबीसै घण्टा- समाचार - कान्तिपुर समाचार
हेटौंडा र चितवनमा अदालत अब चौबीसै घण्टा
जिल्ला अदालतमा न्याय सम्पादन
भाद्र ६, २०७५ प्रताप बिष्ट, रमेशकुमार पौडेल
हेटौंडा/चितवन — जिल्ला अदालतका न्यायाधीश र कर्मचारीहरू चौबीसै घण्टा सेवा प्रवाहमा सक्रिय भएका छन् । मुलुकी संहिता भदौ १ देखि लागू भएपछि मकवानपुर जिल्ला अदालतमा एक न्यायाधीशसहित कम्तीमा ३ कर्मचारी खोजेको अवस्थामा अदालतमा हाजिर हुने गरी चौबीसै घण्टा ‘अलर्ट’ भएर बस्न थालेका छन् । यसले गर्दा उनीहरूको व्यस्तता पनि बढेको छ ।
उनीहरू विगतमा बिहान ९ देखि अपराहन ५ बजेसम्म अदालतमा व्यस्त रहन्थे । अहिले भने उनीहरूको दैनिकी फेरिएको छ । फौजदारी संहिता ऐन र नयाँ कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएपछि न्यायाधीश र कर्मचारीहरूको दैनिकी बदलिएको हो । बिदाको दिन पनि उपलब्ध हुनुपर्नेछ । ‘नयाँ संहिता कार्यान्वयनमा आएको दिनदेखि हामी खटिएका छौं,’ जिल्ला न्यायाधीश खडानन्द तिवारीले भने, ‘हाम्रो व्यस्तता अहिले बढेको छ ।’
प्रहरीले अदालतको स्वीकृतिबिना अभियुक्तलाई गिरफ्तार गर्न नपाउने भएपछि स्वीकृति दिन न्यायाधीशसहित कर्मचारी चौबीसै घण्टा उपलब्ध हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको हो । संहिता ऐन कार्यान्वयनमा आएको दिनदेखि मंगलबारसम्म अदालतले जरुरी ५ पक्राउ पुर्जीको अनुमति दिइसकेको छ । सामान्य १३ वटा पक्राउ पुर्जीको स्वीकृति दिइसकेको छ । यसैगरी चितवन जिल्ला अदालतमा न्यायाधीशसहित ५ कर्मचारी खोजेका बेला हाजिर हुने गरेर तयारी अवस्थामा बस्ने गरेका छन । प्रहरीले अदालतको स्वीकृतिबिना आरोपी समाउन नपाउने भएपछि स्वीकृति दिन न्यायाधीशसहित कर्मचारी चौबीसै घण्टा उपलब्ध हुनु पर्ने भएको हो ।
‘हामीले कार्यालय समयबाहेक पनि पालो मिलाएर एक न्यायाधीशसहित अधिकृत, सहायक कर्मचारी र कार्यालय सहयोगीसमेत कम्तीमा ५ कर्मचारी खोजेका बेला चौबीसै घण्टा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाएका छौं,’ चितवन जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी केशव पौडेलले भने । नयाँ ऐनले पक्राउ पुर्जी जारी गर्न पनि प्रहरीले मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
कुनै व्यक्ति तत्कालै पक्राउ नगरे भाग्ने वा प्रमाण नष्ट गर्ने सम्भावना पनि रहन्छ । ऐनमा त्यस्तो अवस्थामा प्रहरीले जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरी उसलाई समाउन सक्छ । तर पक्राउलगत्तै मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट जरुरी पक्राउ पुर्जी स्वीकृति गराउनुपर्छ । स्वीकृत नहँुदासम्म म्याद थप र अनुसन्धानका काम अगाडि बढ्न नसक्ने व्यवस्था नयाँ ऐनमा छ ।
‘पक्राउ पुर्जी अनुमतिका लागि वा जरुरी पक्राउ पुर्जी अनुमोदनका लागि प्रहरीहरू जुनसुकै बेला आउने भएका कारण हामी बिदा वा रात/दिन नभनी सेवा दिन बसेका छौं,’ मकवानपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तिवारीले बताए । ‘पहिला हामीले पक्राउ पुर्जी जारी गरी मान्छे समाएर चौबीस घण्टाभित्र अदालत पुर्‍याउने काम गथ्र्यौं । अहिले पक्राउ पुर्जीको पनि अनुमति लिनुपर्ने भएको छ । हामीबाहेक चौबीसै घण्टा अन्य निकायको पनि साथ पाउनुपर्ने अवस्था आएको छ,’ चितवन जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) शिव शर्मा आचार्यले भने । नयाँ कार्यविधिअनुसार काम गर्न त्यति ठूलो अलमल र असहज नभएको उनले बताए । ‘हामी अनुसन्धान गर्ने निकाय र अधिकारी हौं ।
अनुशन्धान राम्रोसँग हुनुपर्छ, मनासिब कारणले मात्र व्यक्ति समातिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले नै नयाँ व्यवस्था भएको हो । समयअनुसार सबै पक्षमा सुधार हुने गर्छ । अहिले त्यही भएको हो,’ डीएसपी आचार्यले भने ।
प्रकाशित : भाद्र ६, २०७५ ०९:०८
आर्यघाटको मेचमा बस्दा करेन्ट लागेर मृत्यु
मान्छेलाई नै करेन्ट लागेर ज्यान गएको यो पहिलो घटना हो, यसअघि यस्तो करेन्टमा बाँदर पर्ने गरेका थिए । डेढ दशकअघि एकैपटक पचासभन्दा बढी बाँदरको मृत्यु भएको थियो ।
भाद्र ६, २०७५ शिल्पा कर्ण
काठमाडौँ — सोमबार दिउँसो ३ बजे । पशुपतिको दक्षिणी ढोकाबाट भित्र छिर्दै गरेकी अधवैंशे महिलाले ३/४ वर्षकी नानीको हात समातेकी थिइन् । ‘यता नचलाउ भन्दै छु, करेन्ट लाग्छ,’ ती नानीलाई सचेत गराएपछि सँगै रहेकी महिलालाई उनले भनिन्, ‘अस्ति यहाँ एक जना करेन्ट लागेर मरेको रे ।’
त्यसैबेला अलि पर पशुपति आर्यघाटको २ नं. चितामा पुष्प गन्धर्वको दाहसंस्कार हुँदै थियो । ती महिलाले उल्लेख गरेका, करेन्ट लागेर मृत्यु भएका व्यक्ति पुष्प थिए । ४४ वर्षीय पुष्प गन्धर्वको शनिबार बेञ्चमा बस्दा करेन्ट लागेर मृत्यु भएको थियो ।
पशुपति क्षेत्रमा गाइडको काम गर्दै ६ जनाको परिवार चलाउँदै आएका गन्धर्वको मृत्युपछि परिवार बिचल्लीमा परेको छ । ‘त्यो दिन दिउँसोसम्म ३/४ जना टुरिस्टलाई घुमाउनुभएको थियो,’ गन्धर्वका साथी तथा गाइड एसोसिएसन अफ पशुपतिनाथका अध्यक्ष सुनील थापामगरले भने ।
गन्धर्वले त्यसै दिन एसोसिएसनका सदस्यले बुझाउनुपर्ने मासिक शुल्क पनि बुझाएका थिए । दिनभरिको काम सकेपछि उनी एकैछिन सुस्ताउन त्यहाँ बसेका थिए ।
पशुपति क्षेत्रमै कार्यरत एक गाइडका अनुसार आरती सकिएको केहीबेर मात्रै भएको थियो । व्यवस्थापन कार्यालयसँगै रहेको मलामी बस्ने फलामे मेचमाथि बस्दा गन्धर्वलाई करेन्ट लाग्यो ।
त्यसदिन राति ८ बजेतिर गन्धर्वलाई त्यहीं काम गर्ने नवराज प्याकुरेलले देखेका थिए । ‘दिनहुँ देखिरहेकै मान्छे, घाँटी बांगो बनाएर बेञ्चमाथि ढल्केका थिए । के भएछ भनेर मैले उठाउन खोजेको थिएँ । प्रहरीले रक्सी खाएको मान्छे होला छाडिदिनुस् भनेपछि उठाइनँ,’ उनले भने । पछि बालबालिकाले आएर सास नचलेको भनेपछि गन्धर्वका छोरालाई खबर गरियो । प्रहरीलाई पनि ।
परिवारका सदस्य आइपुगेपछि उनलाई सिनामंगलस्थित केएमसी अस्पताल पुर्‍याइयो । त्यहाँबाट टिचिङ लगियो । त्यहीं उनको ज्यान गयो । आइतबार उनका परिवार र गाइड एसोसिएसनले पशुपति विकास कोषविरुद्ध गौशाला प्रहरीमा उजुरी दिए । कोषको लापरबाहीले प्रवाहित करेन्टका कारण गन्धर्वको मृत्यु भएको भन्दै दोषीलाई कारवाही र क्षतिपूर्ति माग गर्दै प्रदर्शन पनि भयो ।
गन्धर्व आराम गर्न बसेको फलामे बेञ्चनजिकै बिजुलीको पोल छ । पोलसँगै खरीको बोट । बेञ्चमा बटारेर बाँधिएको नाङ्गो तार खरीको बोटमाथि हुँदै पोलमा जोडिएको थियो । ‘त्यो तार कसले जोड्यो, किन र कहिले जोडियो कसैलाई थाहा छैन । दिनभरि बत्ती नबल्ने भएकाले तारमा करेन्ट प्रवाह हुँदैन तर राति त्यसमा करेन्ट हुन्छ,’ अध्यक्ष थापामगरले भने, ‘यसमा कोषको लापरबाही देखियो ।’
ती तारहरू त्यसै फालिएको देखेर कसैले मेचमा बाँधेको हो वा कसैले बिजुलीको कुनै काम गरेर त्यत्तिकै छोडिदिएको हो, कसैलाई थाहा छैन । मान्छेलाई नै करेन्ट लागेर ज्यान गएको यो पहिलो घटना हो, यसअघि यस्तो करेन्टमा बाँदर पर्ने गरेको त्यहाँ कार्यरत रहेकाहरू बताउँछन् । काठमाडौं महानगर– ८ का अध्यक्ष दिनेशकुमार डंगोलले झन्डै डेढ दशकअघि कैलाशमा लगाइएको तारजालीमा करेन्ट प्रवाह भएपछि एकैपटक पचासभन्दा बढी बाँदरको मृत्यु भएको बताए ।
पशुपति विकास कोषले गन्धर्वका परिवारलाई क्षतिपूर्तिबापत १४ लाख रूपैयाँ एक साताभित्र उपलब्ध गराउने र मृतककी श्रीमती अनितालाई करारमा जागिर दिने सहमति उनको परिवारसँग गरेको छ । कोषले घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिएको र छानबिन गर्न समिति गठन गरेको एक कर्मचारीले जानकारी दिए । आफ्नो लापरबाही भएको स्वीकार्दै उनले कोषले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताए ।
घटनाको भोलिपल्ट तार र सबै मेच हटाइएको छ । तर, मेच हटाउँदैमा समस्या नहट्ने यस क्षेत्रमा कार्यरतहरू बताउँछन् । फलामका संरचनासँगै नांगा तार हुँदा जतिखेर जे पनि हुन सक्ने थापामगर बताउँछन् ।
प्रकाशित : भाद्र ६, २०७५ ०९:०६
राष्ट्रपति आजदेखि राजकीय भ्रमणमा
दलहरू कति लोकतान्त्रिक ?
फेरि हिंसात्मक विद्रोह भ्रम मात्र : दाहाल